Sekoly tsy miankina : MIISA 158 NO METY HAMERIM-BOLA -
AccueilRaharaham-pirenenaSekoly tsy miankina : MIISA 158 NO METY HAMERIM-BOLA
Nanao fidinana ifotony teny amin’ireo sekoly tsy miankina manerana an’i Madagasikara ny teo anivon’ny Cisco sy ny DREN ny volana Desambra 2016 lasa iny, ka hita tamin’izany fa mahatratra 158 no isan’ireo sekoly tsy miankina misokatra nefa mbola tsy nahazo alalana hanao izany akory. Mety hamerim-bola noho izany izy ireo raha tsy mahafeno ny fepetra takiana. Ankoatra ny fanakatonana ilay toeram-pianarana dia anisan’ny didy navoakan’ny teo anivon’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena (MEN) sy ny ofisim-pirenena misahana ny sampam-panabeazana tsy miankina (ONEP), tamin’ny 04 Febroary lasa teo izany. Milaza mazava io didy nivoaka io fa efa mihatra ary iharan’izany avy hatrany ireo sekoly izay mandray mpianatra sy misokatra nefa tsy nahafeno fepetra sy tsy nahazo fahazoan-dalana. “Nomena iray volana, taorian’ny fitsirihina izay natao ireo sekoly ireo, hanatona ny CISCO amin’ny fikarakarana sy ny fanatontosana ny dosien’izy ireo mba hanaraka ny fenitra sy ny lalàna. Tsy ireo rehetra izay manao fangatahana anefa no mahazo io fahazoan-dalana hanokatra sekoly io”, hoy ny fanazavana nentin’ny talen’ny ONEP, Fara Hanitra Randrianantoandro. Mbola nambaran’ ity talen’ny ONEP ity ihany, fa ireo izay nahafeno ny fepetra napetraka , dia mahazo io “autorisation d’ouverture” io avy hatrany .
Raha sanatria tena tsy mahazo io fahazoan-dalana io ilay sekoly, kanefa efa nanomboka taom-pianarana, dia manana fotoana hatramin’ny fahataperan’izany izy ireo ary hakatona avy hatrany aorian’izay. Eo no mety hiseho ny famerenam-bola. Maro loatra ireo sekoly tsy manara-dalàna misokatra etsy sy eroa izay ambany dia ambany ny kalitaom-pampianarana hananan’izy ireo. Hita taratra amin’ny fitotonganan’ny fari-pahaizan’ireo ankizy sy ireo tanora izany. Rariny loatra raha misy ny didy navoakan’ny teo anivon’ny MEN mba hialana amin’izany, fa ihany koa mba ahafahana manatsara hatrany ny kalitaom-pampianarana eto Madagasikara. Nanao fanentanana ireo ray aman-dreny ihany koa ity lehiben’ny ONEP ity mba hijery tsara, fa indrindra hahay hisafidy ny sekoly ampidirana ireo ankizy mba hitazomana ny fari-pahaizana efa nisy hatramin’izay. Anisan’ny fanapahan-kevitra noraisin’ireo tompon’andraikitra misahana ny fanabeazana ireo, ny fitsidihana sy ny fitsirihana ny sekoly tsy miankina rehetra eto Madagasikara, eny fa na dia amin’ny fotoanan’ny fialan-tsasatra aza, mba hanatsarana ny fampianarana eto an-toerana. Ny fampianarana tsy miankina eny amin’ny ambaratonga ambony ihany koa dia hahitana ity tsy fanarahan-dalàna ity.
Noporofoin’ny filohampirenena tany Tanambe Ambatondrazaka fa mihaino ny hetahetan’ny vahoaka izy. Hetahetan’ireto vahoaka any Ambatondrazaka ireto ny hahazoana fotodrafitrasa momba ny rano sy ho an’ny fambolem-bary ka dia notanterahany izany. Paompy miisa 41 no natolotra ...Tohiny